DOWNLOAD စော်ဘွားရေယာဉ်စု FSX & P3D - Rikoooo
စော်ဘွားရေယာဉ်စု FSX & P3D ဗားရှင်း 3.0
downloads ရယူရန္ 456 833
ဗားရှင်း 3.0 - 18 / 08 / 2016
အတူ compatibility FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုနှင့် Prepar3D v3
နယူးအဲယားဘတ်စ် A319-15 စော်ဘွားအလုပ်အမှုဆောင် - ထူးခွားသောဝန်ဆောင်မှု, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်။ Rikoooo အားဖြင့် texture
2D panel ကိုအတွက် icon တွေကိုနှင့်အတူအားလုံးလေယာဉ်အတွက် FMC Added
A380 (သောမတ်စ်ရုသမှ A340 VC ကို) အတွက်နယူးကို virtual cockpit - ။ ယခင် A380 VC ကိုလည်းယုန်ကလေးကြီးနှင့်လေယာဉ်ပျံစနစ်တကျ AP mode မှာထိန်းချုပ်မရနိုင်တော့
A380 ဘို့ Added စော်ဘွား LA က Dodgers အထူး repaint
A2 ဘို့နယူး 380D Panel ကိုနှင့်အသစ်အထွာ
A330 နှင့် A340 များအတွက်တိုးတက်ကို virtual cockpit
နယူး HD ကို panel ကိုနှင့် B777 အသစ်အထွာ
၏အဓိက folder ထဲမှာ Added DLL ကို msvcr70.dll FSX / P3D B777 အတူ Display ကိုပြဿနာပြင်ပေးဖို့
နယူး GPWS ဘိုးအင်းနှင့်အဲယားဘတ်စ်အသံ
auto-installer ကိုဗားရှင်း 10
Fixed အများအပြား bug တွေ
ဗားရှင်း 2.1 - 05 / 05 / 2013
ရေဒီယိုသေးငယ်လွန်းခဲ့ပါတယ်, ထို A2 ၏ 380D panel ကို Fixed ။
ဗားရှင်း 2.0 - 26 / 04 / 2013
installation သဟဇာတ Windows ကို 8 လုပ်. Prepar3D.
A2X နှင့် A33X များအတွက် VC နှင့် 34D Panel ထဲကတစ်ဦး FMC ထည့်သွင်းခြင်း။
အ A33X နှင့် A34X အတွက်နယူးအနက်ရောင်အထွာနှင့် VC ကိုအသစ် HD ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။
B747 + FMC + Autoland gauge ဘို့ Alrot က "အဆင့်မြင့် VC ကို" ။
A2 များအတွက် VC ကိုရယူထားသောစစ်တမ်း + များအတွက် Rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ 380D panel ကိုထည့်သွင်းခြင်း FSX, ဂီယာ gauge အပါအဝင် gauge ၏ဖန်တီးမှုအများအပြား bug တွေနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ fixed ။
အဘို့အဖန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ B777-XXX က + လိုက်လျောညီထွေအတွက် FMC (alpha Chanel) ထည့်သွင်းခြင်း Prepar3D.
ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်မှုများအတွက် DXT5 format နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ကူးပြောင်းခြင်း။
များစွာသောအခြား bug တွေကိုဖြေရှင်းနိုင် ...
နှင့်သဟဇာတစော်ဘွားရေယာဉ်စု v3.0 ဖြည့်စွက် FSX SP2, Acceleration, FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကို နှင့် Prepar3D v XX။ အခမဲ့ရရှိနိုင်တစ်ခုခြွင်းချက်စုစည်း။ Rikoooo အများအပြား bug တွေကိုပြုပြင်တာတွေအပါအဝင်ကိရိယာများအားစနစ်များ, ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ပေးထားတယျ။ ဒီသင်္ဘော Rikoooo မှသီးသန့်မရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတည်ရှိပါဘူး။
ဒီ pack ကိုသြဂုတ်လ 18, 2016 များအတွက်အဖြစ်စော်ဘွားစင်းကိုမှသက်ဆိုင်ရာအပေါငျးတို့သလေယာဉ်များပါဝင်သည်။
လေယာဉ်ပေါ် Melody ရရှိနိုင်ပါ Emirates:
တချို့ကအထွာ, အထူးသဖြင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖအတွက်®မြားကိုရှေးခယျြသောမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ပိုကောင်းလိုက်လျောညီထွေဘို့အခုမှပြီ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလေယာဉ်အင်ဂျင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံကိုရှိပါတယ်, General Electric, Rolls-Royce Trent သို့မဟုတ် CFM အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ လေယာဉ်မော်ဒယ်သငျသညျအလေးခြိနျ, အရွယ်အစား, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အင်ဂျင်ပါဝါကိုအတွင်းမည်သည့်ခြားနားချက်ခံစားရစေရန်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသောကြောင့်, သငျသညျတခုဘိုးအင်း 777-200ER နှင့် 777-300 သို့မဟုတ် 777-300ER အကြားခြားနားချက်ကိုလုပ်ရမည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလေယာဉ်ပျံကသူ့ကိုမှန်ကန် counterpart အဖြစ်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစော်ဘွားနှင့်ဝသကဲ့သို့အနီးကပ်တတ်နိုင်သမျှကိုက်ညီဖို့ (အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) Rikoooo ဖွငျ့သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောပြီ။ B777-XXX ကပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ် utility မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီအဆင်းအရောင်နှင့်အလွယ်တကူ panel က "utility" နဲ့ကာတွန်းနိုင်ပါသည်။
အားလုံးမော်ဒယ်များ (အ 747-8F Cargo မှလွဲ. ) cabin ထဲမှာကြေငြာချက်တစ်ခုစနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် GPWS (ကြည်း Proximity Warning System ကို) နှင့်တစ်ဦး 3D ကို virtual cockpit နဲ့တစ်ဦး 2D panel ကကြသည်။ ဒါ့အပြင် FMC, မြေပြင် Handlin စနစ်, Airbus ဘို့ autoflare နှင့်ပိုပြီးပါဝင်သည်။
ပထမဦးဆုံးစတင်လာတဲ့အခါသင် (မပြင်ဆင်ထား 3D နှင့်အတူ) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတူအကြောင်းနှစ်ဆယ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရလိမျ့မညျ
လိုအပ်သောအဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ Execute ဖြေဆိုပေးပါ။
အဲယားဘတ်စ် A330-200 စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D 1999 en ဝန်ဆောင်မှု en Entré
capacitive ကျမ်းပိုဒ် en:3အတန်း 237 ou en2အတန်း 278
အဲယားဘတ်စ် A340-300 စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D
ကျမ်းပိုဒ် en capacitive:3အတန်း 257
အဲယားဘတ်စ် A340-500 စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D 2003 en ဝန်ဆောင်မှု en Entré
ကျမ်းပိုဒ် en capacitive:3အတန်း 258
အဲယားဘတ်စ် A380-861 စော်ဘွား & LA က Dodge FSX & P3D
-3(moyen-courrier) 489 Classes ရဲ့ 517 (ရှည် courrier très) et2(ရှည် courrier) et 600 Classes: ကျမ်းပိုဒ် en capacitive
ဘိုးအင်း 747-8F စော်ဘွား Cargo FSX & P3D
Rikoooo အားဖြင့်ပင်မ repaint
ဘိုးအင်း 777-200 / ER စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D 1996 en ဝန်ဆောင်မှု en Entré
Moteurs: RR Trent 877 (type ကိုအဖြေ) / RR 892 (type ကိုခ)
configuration de la cabin:3အတန်း 290 ou2အတန်း 346
ဘိုးအင်း 777-200LR စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D Entré en ဝန်ဆောင်မှု en 2007 est un l'des ကိရိယာများအား Les ပေါင်းperfectionnés au Monde
-3266 Class: ကျမ်းပိုဒ် en capacitive
ဘိုးအင်း 777-300 စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D possède 12 en စော်ဘွားများ။ Arrival dans la flotte en 1999
ကျမ်းပိုဒ် en capacitive:3အတန်း 364
ဘိုးအင်း 777-300ER စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု FSX & P3D Arrival dans la flotte en 1999
3 အတန်း 364 / 358 / 354 ou2အတန်း 427 / 442: ကျမ်းပိုဒ် en capacitive
အဲယားဘတ်စ် A319-115 စော်ဘွားအလုပ်အမှုဆောင် FSX & P3D
Rikoooo အားဖြင့် Repaint
ဗီဒီယို: ရီးရဲလ် A319-115 အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုအလုပ်အမှုဆောင်